सेयर कारोबार ६४ प्रतिशतले बढ्यो, एक अर्ब २४ करोडको किनबेच – BikashNews
सेयर कारोबार ६४ प्रतिशतले बढ्यो, एक अर्ब २४ करोडको किनबेच
२०७२ मंसिर ११ गते १२:४८ विकासन्युज
काठमाडौं, ११ मंसिर । यो साता सेयर कारोबार ६४ दशमलब ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो साता जम्मा ७५ करोड ८२ लाख मुल्य बराबरको १५ लाख ८७ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर मात्रै कारोबार भएको थियो । तर यो साता १५० कम्पनीको २४ लाख ३६ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब २४ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको हो ।
साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २७.३७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १०४४ दशमलब एक अंकमा झरेको छ । यो साता कारोबार रकमका आधारमा आठ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको सेयर बेचेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो नम्बरमा रह्यो ।
यो साता नेप्सेमा सूचिकृत नयाँ कम्पनीहरु
त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या एक लाख ७४ हजार कित्ता सेयर किनबेच गरेर सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम अग्रस्थानमा छ रहन सफल भयो । त्यसैगरी ४ हजार ८ सय ८३ वटा कारोबार गरेर कारोबारका संख्याका आधारमा अपि हाईड्रो एक नम्बरमा रह्यो ।
अब हामी ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौंः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
आज ‘मार्च ३१’ खोई रेल आएको ?
‘यसरी फैलिन्छ अन्धविश्वास’
कडा निर्णय लिने स्थिती नआओस्, आ-आफ्नो कर्तव्य बोध गरौं: अर्थमन्त्री खतिवडा
रातभरी हिडेर घर जान थाले काठमाडौंका मानिसहरु
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले काेराेना राेकथाम गर्न एक अर्ब डलर सहयाेग गर्ने